State Counsellor attends 1st meeting of Steering Committee for Implementation of BRI – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, Chairperson of the Steering Committee for the Implementation of BRI, attended and made an opening address at the first Meeting of the Steering Committee which was held in Ayeyarwaddy Hall of the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw, at 10:00 am on 18 February 2019. Present at the Meeting were Vice President U Myint Swe, Vice Chairman of the Steering Committee, Union Ministers, Union Attorney General, Union Auditor General, Chairman of Nay Pyi Taw Council and Chief Ministers who were the Members of the Steering Committee and the officials concerned.
In her opening remarks at the Meeting, the State Counsellor said that the Belt and Road Initiative which was initiated by the People’s Republic of China, was being participated by over 60 countries to cooperate not only in building infrastructure connectivity, but also in many other sectors. She also mentioned that beingacountry located at the strategic position in BRI, Myanmar would also need to participate in the said Initiative. She hoped that cooperation activities under the BRI could present opportunities to bring benefits not only to Myanmar but to the region as well. She also added that at the same time, it will be necessary to study and scrutinize the proposed projects to ensure mutual benefits to both sides. She also stressed the need to implement the BRI in accordance with the Five Principles of Peaceful Coexistence. She also put emphasis on the need to thoroughly scrutinize the projects under BRI from different perspectives both for the short-term and long-term benefits of the country and the people, and to make sure that the selected projects are in conformity with national plans, policies and domestic procedures.
Afterwards, Vice President U Myint Swe, Vice Chairman of the Steering Committee, said that it was of great importance to learn the experiences of other countries in the region in implementation of projects under BRI and to choose the suitable projects and programs which are really necessary for the development of the country, and could really bring benefits to the people.
He also mentioned that it would be more effective if all committees concerned which were established to supervise and implement the BRI projects, could work together hand in hand in close coordination, especially among the State and Region Governments and the Ministries concerned in implementing the projects.
Then, Dr. Than Myint, Union Minister for Commerce, reported the progress on the establishment of Myanmar-China Border Economic Cooperation Zone; U Soe Win, Union Minister for Planning and Finance, reported the progress on the implementation of the Myanmar-China Economic Corridor; and U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, reported on the preparation for the 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation to be held in Beijing, China in April 2019.
Moreover, the participants of the Meeting exchanged views on the cooperation and activities being undertaken by their respective Ministries under the Belt and Road Initiative.
The meeting was concluded after the State Counsellor and Chairperson of the Steering Committee on implementation of BRI gave additional comments and guidance on the discussions.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍အမှာစကားပြောကြား
(၁၈-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်း (Belt and Road Initiative – BRI) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဧရာဝတီခန်းမ၌ ယနေ့၊ နံနက် ၁၀ဝ၀ နာရီတွင် ကျင်းပရာ အဆိုပါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ဦးဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၆၀) ကျော် ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆက်သွယ်ရေးသာမက ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကျယ်ပြန့်သော အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထဝီအနေအထားအရ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းတွင် မဟာဗျူဟာကျသည့် နေရာ၌ တည်ရှိနေသည့်အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန် ရှိကြောင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမက ဒေသအတွက်ကိုပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင် ကြောင်း၊ သို့သော် စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးစီးပွားအတွက် မျှမျှတတဖြစ်အောင် မဟာဗျူဟာနှင့် နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူကြီး (၅) ရပ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ချက်ကို အလေးပေး ပြောကြားလိုပါ ကြောင်း၊ စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူများအတွက် ရေတိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးသာမက ရေရှည်အကျိုးကိုပါ ရှုထောင့် အမျိုးမျိုးက လေ့လာစိစစ် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းအောက်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းများ၊ မူဝါဒများ၊ ပြည်တွင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ဦးဆောင်ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများကို ဦးစွာလေ့လာပြီး မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်ပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု ရှိစေမည့် စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်သွားကြရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရပ်ဝန်းနှင့် လမ်းကြောင်းအစီအစဉ်ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့အတွက် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ကော်မတီ အသီးသီးက လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အချိတ်အဆက်မိမိ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြမှသာလျှင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အချိတ်အဆက်မိမိ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များအကြား ပိုမိုထိရောက်စွာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးသည် အရေးကြီးကြောင်းဖြင့် ထည့်သွင်းပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုန် တည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် ကလည်းကောင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် စီးပွားရေးစင်္ကြံ အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အခြေအနေများကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းကလည်းကောင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဒုတိယအကြိမ်၊ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဖိုရမ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်ကလည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူများက ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းအောက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိတို့ ဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် သဘောထားအမြင်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။
ထို့နောက် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တင်ပြမှုများအပေါ် ဖြည့်စွက်၍ လမ်းညွှန်မှာကြားပြီး နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။